June 11, 2013 – democracy for burma
U WIRA THU “အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ကမ်ပိန်း စပြီ”
On June 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
“အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ကမ်ပိန်း စပြီ”
ဗလီမီးရှို့စရာလည်းမလို၊ ဆိုင်ဖျက်စရာလည်းမလို၊ တိုက်အိမ်ဖြိုစရာလည်းမလို၊ လူသတ် အကြမ်းဖက်စရာလည်းမလိုဘဲ လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးရုံဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာလုံခြုံရေး အပြည့်အဝရရှိစေမည့် “အမျိုးစောင့်ဥပဒေ” ပေါ်ပေါက်ရေး Campaign လှုပ်ရှားမှုကို ယနေ့ ၁၁-၆-၂၀၁၃ နေ့မှာ စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းမှာကျင်းပသည့် မန္တလေးမြို့ပေါ် ပရဟိတလူမှုရေး ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း (၄၁)ဖွဲ့ တက်ရောက်ကြပြီး တညီတညွတ်တည်း လက်မှတ်ရေးထိုးကာ မန္တလေးမြို့တစ်မြို့လုံးသို့ လက်မှတ်လိုက်ကောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ယခုအထိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၄၁)ဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပေါင်း (၅၆)ခုသို့ ဖြန့်ကျက်ကာ လက်မှတ်များ ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
အမျိုးစောင့်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ အဓိပတိ နာယကဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသ၊ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဆရာတော်များ ဖြစ်ကြသော ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒပါလ၊ ဘဒ္ဒန္တသီလက္ခန္ဓာဘိဝံသနှင့် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိကဆရာတော်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အမျိုးဘာသာ သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဦးဆောင် ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဤဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပါက မူဆလင်တို့ ဝါးမျိုလိုမှု၊ ဖျက်ဆီးလိုမှု၊ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လိုမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လွတ်တော်ကိုယ်စလှယ်တိုင်းသို့ လက်မှတ်များပေးပို့ကာ လွတ်တော်ထဲမှာ အဆိုပြု၊ တင်ပြ၊ ဆွေနွေး၊ အတည်ပြုနိုင်သည်အထိ စီစဉ်ထားသည်။
အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ကမ်ပိန်း လာလေပြီ။
မြန်မာပြည် အပြည့်အဝ လုံခြုံမှု ရှိတော့မည်။
MRTV-Minister Foreign Affairs နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးဇင်ယော် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမီ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
On June 11, 2013 June 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများ စုံစမ်းရန် အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြေပြင်ကွင်းဆင်း စုံစမ်းရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဇင်ယော်၊ အလုပ်သမား အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဒေါ်ဝင်းမော်ထွန်းတို့ ဦးဆောင်သည့် အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးသည် ဇွန် (၁၁) ရက် ညနေပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားရာ တာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ကြသည်။
DONATION LIST TO HELP OUR BURMESE CITIZEN IN MALAYSIA-မလေးမြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက် ပြည်တွင်းမှလှုဒါန်းမှုစာရင်း
On June 11, 2013 June 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma1 Comment
PHOTO CREDIT NAY THUREIN
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း မြန်မာအလှူရှင်အဖွဲ့၏ ပထမဆုံးအစီအစဉ်
(One for all , All for One)
မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံသူမဆို 12.6.2013 (သို့) 13.6.2013
ကြား အမိမြန်မာမြေသို့ ပြန်လိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အယောက် (20) အားစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန် အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည် ။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးထဲမှ မည်သည့်သူမဆို စတင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ။ ပြန်မည့်သူများသည် မိမိတို့လက်ထဲတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ လဝက (Immigration) အားဖြတ်ကျော်ရန် စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည် (ဥပမာ – ပါမစ် သို့မဟုတ် Special Pass ရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်) ။
ယခု အစီအစဉ်သည် မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား စိတ်ဆင်းရဲပူပန်နေသူများအားလုံးအား မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံး စုပေါင်းထားသည့် မလေးရှားရောက် မြန်မာများအတွက် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အားပေးသံ အစဖြစ်သည် ။
ပါမစ်မရှိသူများ အားလည်းအမြန်ဆုံး immigration မှတရားဝင်ခွင့်ပြုသွားစေရန်အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်။
ပါမစ်မရှိသော်ငြား မလေးရှားလဝကတွင် Special Pass (Compound) ကြေးပေးသွင်းပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ခက်ခဲနေသူများ အတွက်လည်း အကြုံးဝင်သည် ။
ထို့မျှမက လယာဉ်လက်မှတ် အစောင် 1000 အား အဖမ်းဆီးခံ နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အခမဲ့ ကူညီသွားမည့်အပြင် …..
မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားမငယ်စေရန် အတွက် ကျွန်တော်တို့
တာဝန်ယူရဲသူများအားလုံးရဲ့ အားပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး
မနက်ဖြန် 12.3.2013 မှစတင်ကာ မလေးရှားရောက်မြန်မာများအတွက်
အမိမြေက လစ်လျှူရှု့မထားကြောင်း ကို
မလေးရှားရောက် မြန်မာများသိအောင် ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်မည် ။
မည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားမဆို …..
မည်သည့် ငွေတစ်ပြားမှ ပေးရန်မလို ….
KBZ , Max Myanmar , MAI , ….
Hello Myanmar Journal ဦးသက်ပြင်း (မလေးရှား)
မလေးရှားမှ မြန်မာများ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပတ်များ
ရွှေလူငယ် – ၀၁၂ ၄၄၆၈၈၄၂ (ကိုမျိုး ဧဒင်ဥယျာဉ်)
ပညာအိမ် – ၀၁၇ ၃၀၇၄၆၂၂ ( ဦးမျိူးညွှန့်)
ဦးမျိူးညွှန့် – ၀၁၆ ၉၉၈၀၆၀၁ (SAVE THE AGE)
ဦးသီဟမောင်မောင် – ၀၁၂ ၃၈၈၈၄၈၀ (MMSL Industrial Sdn Bhd)
ဦးညီညီ – ၀၁၇ ၃၅၅၈၇၁၀၀ (ခေါင်းလောင်းသံဂျာနယ်)
ဦးဘိုဘိုအောင် – ၀၁၄၃၄၂၆၅၁၇ (ရာဝမ်း)
ဦးအောင် – ၀၁၉၆၄၉၁၄၇၃ (ကိုအောင် နီလိုင်း)
HTOO FOUNDATION GROUP
1. USD 100000
2. Free Air Bagan local air tickets
The Messenger Media
1. USD 2000
Myanmar Airway International (MAI)
1. 50% Discount KL-YGN until Jul 12
Max Myanmar Co, Ltd
1. USD 20000
2. 1000 free Air tickets KL-YGN
1. USD 50000
1. USD 1000
KAMPUNG FREE FUNERAL SERVICE MALAYSIA
Kampung Free Funeral Services-DONATION RECEIVED- ကွယ်လွန်သူ ကိုဝင်းလှိုင် အသက်(၃၄) နှစ် ချာရပ်စ် ဆေးရုံကြီးတွင် ၃ – ၆ –
Air Bagan donated free travel to those who came back from malaysia-Air Bagan လေကြောင်းလိုင်း အနေဖြင့်
On June 11, 2013 June 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma1 Comment
Air Bagan donated free travel to those who came back from malaysia. They won’t chargeapenny
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Air Bagan လေကြောင်းလိုင်း အနေဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများ နေရပ်သို့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် Air Bagan အနေဖြင့် ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအတွင် အခမဲ့လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက်လည်း Air Bagan လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ၏ လစ်လပ်နေရာများတွင် လာရောက်လျှောက်ထားပါက ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခန့်ထားသွားရန် အတွက်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လိုပါက Public Relation Department (ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၅၀၄၂၈၄) သို့တိုက်ရိုက် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
YANGON MEDIA-မလေးရှားမှ ပွနျရောကျလာမညျ့ မွနျမာမြားအတှကျ အဲပုဂံက အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ဖနျတီးပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလကျမဲ့ မဖွဈရလအေောငျ အဲပုဂံ နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော အလုပျခနျ့ထားနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးသှားပါမယျ ၊ သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလြှောကျတယျဆိုတာနဲ့ အလုပျခနျ့ နိုငျအောငျ ဦးစားပေးစဉျးစားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ”ဟု အဲပုဂံမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးကပွောသညျ။
COM_CONTENT_WRITTEN_BY ON TUEAMUTCE_JUNE+0000RJUNE_SHORTAMUTC_0C3. POSTED IN သတငျး
မလေးရှားမှ ပွနျရောကျလာမညျ့ မွနျမာမြားအတှကျ အဲပုဂံက အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ဖနျတီးပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလကျမဲ့ မဖွဈရလအေောငျ အဲပုဂံ နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော အလုပျခနျ့ထားနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးသှားပါမယျ ၊ သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလြှောကျတယျဆိုတာနဲ့ အလုပျခနျ့ နိုငျအောငျ ဦးစားပေးစဉျးစားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ”ဟု အဲပုဂံမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးကပွောသညျ။
yangon media အလုပျလကျမဲ့ပွညျတျောပွနျမြားအတှကျ အဲပုဂံက အလုပျအကိုငျစီစဉျပေးမညျ
မလေးရှားမှ ပွနျရောကျလာမညျ့ မွနျမာမြားအတှကျ အဲပုဂံက အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ဖနျတီးပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလကျမဲ့ မဖွဈရလအေောငျ အဲပုဂံ နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော အလုပျခနျ့ထားနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးသှားပါမယျ ၊ သူတို့အနနေဲ့ အလုပျလြှောကျတယျဆိုတာနဲ့ အလုပျခနျ့ နိုငျအောငျ ဦးစားပေးစဉျးစားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ”ဟု အဲပုဂံမှ
Myanmar minister backs two-child policy for BENGALI (Rohingya)-Two-Child Policy ဟာ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေအတွက် ကောင်းဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊
Two-Child Policy ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ပြောကြား
ရိုက်တာသတင်းဌာနက သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို မေးမြန်းထားချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Two-Child Policy ဟာ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေအတွက် ကောင်းဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးအများကြီး ယူလေ့ရှိကြကြောင်း၊ ဒေသအချို့မှာ ဆိုရင် မိသားစုတစ်စုကို ကလေး ၁၀ ယောက်ကနေ ၁၂ ယောက်အထိ ယူကြတာမျိုး ရှိနေကြောင်း၊ ဒီလို ကလေးအများကြီး ယူတာကြောင့် မွေးလာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေ အာဟာရ ပြည့်ဝရေးအတွက် လည်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကလေးသူငယ်တွေ ပညာသင်ကြားပေးဖို့ဆိုတာကလည်း မလွယ်ကူလှ ကြောင်း၊ အရေအတွက်များနေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လည်း အခက်အခဲဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်ရီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဒီ Two-Child Policy ကို ထောက်ခံသလား လို့ မေးတဲ့အခါ ဦးခင်ရီက “ထောက်ခံပါတယ်” လို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
NAYPYITAW: Myanmar’s Immigration Minister has expressed support foracontroversial two-child limit onaMuslim minority group that opposition leader Aung San Suu Kyi and the United Nations call discriminatory andaviolation of human rights. Continue reading “Myanmar minister backs two-child policy for BENGALI (Rohingya)-Two-Child Policy ဟာ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေအတွက် ကောင်းဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊” →
SOURCE U TUN WAI
ကိုယ်နိုင်ငံသားကို ချစ်ကြတယ် ။
“မလေးရှားနိုင်ငံမှပြန်ရောက်လာကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကနဦးအဖြစ် ဒေါ်လာတစ်သိန်းလှူဒါန်းမည်”
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်ခံရမှုများကြောင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာကြမည့်သူများအတွက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကနဦးလှူဒါန်းမှုအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းအား လှူဒါန်းပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းHtoo Foundationဖေစ့်ဘွတ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
donate 100,000 Dollar to help Burmese and plan to giveajob who return from Malaysia
btw photo from 2011
China deports Myanmar migrant workers
CREDIT EMG 11.JUNE 2013
Myanmar migrant workers entering China using temporary boarder passes are being deported for over-staying, according to local immigration officials.
“Starting from early months of 2012, over 500 migrant workers have been detained in China deported back to Myanmar,” says Min Swe, an immigration officer from Muse border town.
The reasons for arrest and deportation are that migrant workers overstay their given period or attempt to travel beyond the limited area allowed to work. However, some are arrested because employers don’t want to pay their wages.
“When employers don’t want to pay the wage they inform the Chinese Police for arrest. A work permit (Green Book) is needed for Myanmar workers who want to work in China and they have to apply for that. Those who have that book in hand can work in China. Those who don’t have that book are being bullied,” says Min Swe.
On average 6000 to 7000 Myanmar migrants cross through Muse border town to work in China,amajority of them under temporary border passes. Most are youths between 20 and 40 years old who generally work in brick, battery and electronic factories earning between 5000 and 10,000 kyats per day.
Organisations against human trafficking and for the protection of labour rights have urged the Chinese authorities to open an office for the protection of foreign workers in China.
“If that office opens, the situation of Myanmar workers will be much better. We have requested them to give work permit books for Myanmar workers,” said migrant worker Shwe Li.